ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပေးသွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပို့သူ - Guangdong HOMURG Building Materials Co. , Ltd.
Wood Grain ဗီရိုတံခါးများ
သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူ Quartz Countertop
လူပျို Bowl မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်
နှစ်ချက် Bowl မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်
Down မီးဖိုချောင် faucets Pull
ရောနှော Valve ရေချိုးခန်း
က Wall Hung ကအိမ်သာ
drop-in ကို Tubs ပတ်ပတ်လည်
က Wall Hung ကနစ်မြုပ်
ရေချိုးခန်း faucet သို့မဟုတ်ဘုံဘိုင်
motion အာရုံခံ faucet
ရေချိုးခန်း faucet ထဲကဆွဲထုတ်
မြောက်အမေရိက EURO ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်
WC ဆီးက Wall-တပ်ဆင်ထား
ဝတ်လုံ & သုတ်ပဝါ Hook
အိမ်သာ Brush နဲ့ Holder
ဒီဇိုင်း & စိတ်တိုင်းကျ
ရေချိုးခန်းအကြံပြုချက်များ & အပြင်အဆင်
မီးဖိုချောင်အကြံပြုချက်များ & အပြင်အဆင်
အဘယ်ကြောင့် HOMURG Choose?
ပြည်တွင်းကားရောင်းဝယ်ရေး Be မှ
အားလုံးအမျိုးအစားများ မိုးရွာရွာပန်းရေချိုးခန်းသတ်မှတ်မည်ဖုံးကွယ်ပန်းရေချိုးခန်းစနစ်အပူထိန်းကိရိယာပန်းရေချိုးခန်းရောနှော Valve ရေချိုးခန်းအပူထိန်းကိရိယာပန်းရေချိုးခန်း Valveဦးခေါင်းရေချိုးခန်း one-အပိုင်းအစအိမ်သာTwo-အပိုင်းအစအိမ်သာက Wall Hung ကအိမ်သာBidet အိမ်သာ Freestanding ရေချိုးကန်Clawfoot tubsdrop-in ကို Tubs ပတ်ပတ်လည်ဆိပ်ခံတံတားဝီလီယမ်ဗုံရေချိုးကန် faucet အောကျခံခုံနစ်မြုပ်က Wall Hung ကနစ်မြုပ် ရေချိုးခန်းဝှမ်းဘုံဘိုင်ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ် faucetရေတံခွန်ရေချိုးခန်း faucetmotion အာရုံခံ faucetရေချိုးခန်း faucet ထဲကဆွဲထုတ်မြို့ရိုးအတောင်ကို faucet ဥရောပရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်အမေရိကန်ရေချိုးခန်းအနတ္တမြောက်အမေရိက EURO ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ခေတ်မီရေချိုးခန်းအနတ္တက Wall-တပ်ဆင်ထားရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ရေချိုးခန်းသိုလှောင်ကက်ဘိနက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါထိန်သိမ်းဝတ်လုံ & သုတ်ပဝါ Hookအိမ်သာစက္ကူရှင်အိမ်သာ Brush နဲ့ Holderဆပ်ပြာဟင်းသွားတိုက်တံရှင်ရေချိုးခန်း Caddies စီးပွားဖြစ် ရေချိုးခန်းရေပိုက်စုပ် drainangle valveကြမ်းပြင်ယိုစီးမှု မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ်မီးဖိုချောင် faucetsမီးဖိုချောင်စင်ပေါ်
မှုတ်သွင်းဒီဇိုင်း & ္တွတန်ဖိုးမရြိ Customization
Shower Heads နှင့် Hose ပါသောအရောအနှောရောစပ်ပါ
၃ ခုနှင့်အတူရေတံခွန်ရေချိုးခြင်း ရှိုး ...
ရောနှောပုတ်။ ဦး ခေါင်းနှစ်မျိုးပါသောရေချိုးကန် ပြပါ ...
ကြေးဝါရောနှောသောအဆို့ရှင်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ရေပုံးနှစ်ခု ...
ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောမိုးရေ | ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်
ရောနှောထိပုတ်ပါသောရေချိုးခန်းခန်း | ရေချိုးခန်းပေးသွင်းသူများ
ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်သောရေပန်းခေါင်းနှင့်အဆို့ရှင် | မအိ ...
Shower Mixer ရေတံခွန် Shower Head နှင့်အတူထိပုတ်ပါ
မိုးရွာသွန်းမှု Shower Head နှင့် Diverter နှင့်အတူရေပန်းပစ္စည်းများ
overhead နှင့် hand showe ပါသောအရောအနှောဆပ်ပြာအဆို့ရှင် ...
ရောနှောအဆို့ရှင်နှင့်ရေငုပ်များပါသောမိုးရေများ | ရေချိုးခန်း ...
ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောမိုးရေ မနောဖွာရေ ...
Dual H နှင့်တပ်ဆင်ထားသည့်နံရံပေါ်ကရေချိုးခန်းအမိုးများကို ...
ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောရေရောစပ်စက် ရေပန်းရေချိုးခန်း ...
ရောနှောအဆို့ရှင်နှင့်အတူမိုးရေ Shower Dealers
နှစ်ထပ်ခေါင်းများပါ ၀ င်သောနံရံကပ်ရေချိုးရေချိုးခန်းအရောအနှော
Exposed Shower Mixer မျက်နှာကျက်ရေပန်းခေါင်းနှင့်အတူ
မီးဖိုချောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအကြံပြုချက်များ | ထုံးစံမီးဖိုချောင်ဗီရို ...
Galley မီးဖိုချောင်သစ်ပြုပြင်ရေး | ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက် Kitc ...
Shaker မီးဖိုချောင်ဗီရို | စိတ်ကြိုက်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ...
အပြာရောင်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ U-shaped မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်း ...
L-shaped မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်း | ဇိမ်ခံမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ...
Bespoke Cab မှအမေရိကန်ပုံစံရှိဂယ်လီမီးဖိုချောင် ...
J တွင်ရှိသော L-shaped မီးဖိုချောင်ပုံစံနှင့်ကက်ဘိနက်ဒီဇိုင်း ...
မြောက်ပိုင်း Eu ရှိမီးခိုးရောင်ဗီဒိုများပါရှိသည် U-shaped မီးဖိုချောင် ...
ဥရောပမီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းနှင့်စက်ရုံ - တိုက်ရိုက် ၀ တ ...
မီးဖိုချောင် Layout အကြံပြုချက်များ | စိတ်ကြိုက်မီးဖိုချောင်ဗီရို S ...
မီးခိုးရောင်ဗီရိုများနှင့် Blac မှခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်း ...
Galley မီးဖိုချောင် Layout | မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ဒီဇိုင်း
Dual ထောင့်ချိုးရေချိုးခန်းပါရေချိုးခန်း Shower C ...
ရေချိုးခန်းရေချိုးခန်းနှစ်ထပ်စင် | နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသော C ...
နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသောအ ၀ တ်အထည် | ရေချိုးခန်းရေချိုးရေချိုးခန်း ...
ခရုမ်းရှိရေချိုးခန်း Caddy | နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသောရေချိုးခန်း ...
Shower Corner Shelf | သံမဏိရေချိုးခန်း Caddy
Corner Shower Caddy | နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်း Baske ...
နှစ်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်ဖန်ထည် | ရေပေါ် Glass Shel ...
ဖန်ခွက်နှင့်အတူ Glass ရေချိုးခန်းမျက်နှာပြင် | နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့် Gl ...
သွားတိုက်တံ Holder အမှတ်တံဆိပ် | ရေချိုးခန်းအရမ်း ...
ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်များသွားတိုက်တံ | Vintag ...
One နှင့်အတူဇိမ်ခံကားဖြင့်ရွှေသွားတိုက်တံ ...
Chrome ရှိ Tumbler Holder နံရံ သွားတိုက်တံ
ရေချိုးခန်းသွားတိုက်တံ | သွားတိုက်တံ ...
သွားတိုက်တံကိုင်စက် | သွားတိုက်တံကိုင် ...
Chrome တွင်နှစ်ကြိမ်သွားတိုက်တံ | သွားတိုက်
တံတိုင်းတပ်ထားသောသွားတိုက်တံ | သွားတိုက်တံ
ရေချိုးဆပ်ပြာရည်အတွက်ဆပ်ပြာရည် Bar ဆပ်ပြာအိတ်ဆောင်
ဆပ်ပြာကိုင်ဆောင်သူ | နံရံပေါ်ကဆပ်ပြာဖိုင်တွဲ ...
မီးခိုးရောင်မီးဖိုချောင်ခန်းများ မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်း ...
ဘရောင်းမီးဖိုချောင်ဗီရို | စိတ်တိုင်းကျဝန်ကြီးအဖွဲ့ Maker
အံဆွဲနှင့်အတူအခြေစိုက်စခန်းဗီရို | မီးဖိုချောင်သုံးအခြေခံအဆောက်အ ဦး ...
မီးဖိုချောင်နံရံဗီရို | စိတ်တိုင်းကျဝန်ကြီးအဖွဲ့ Maker
မီးခိုးရောင်နှင့် Whit အတွက်ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်ဗီဒို ...
လယ်ယာအိမ်မီးဖိုချောင်ဗီရို | မီးဖိုချောင်ပြင်ဆင်မှု ...
ဇိမ်ခံရှေးဟောင်းမီးဖိုချောင်ဗီရို | U-shaped Kitc ...
မီးဖိုချောင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံကုန်ကျစရိတ် | မီးဖိုချောင် Makeover ကန်ထရိုက်တာ
မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်နှင့် 3D De မှကျွန်းဒီဇိုင်းအကြံဥာဏ်များ ...
အတိုင်းအတာ & ဒီဇိုင်း
အတည်ပြုချက် & Order
ထုတ်လုပ်မှု & သင်္ဘော
ရေချိုးခန်းအပြည့်အဝ Range နှင့်မီးဖိုချောင်ထုတ်ကုန်များ
သြစတြီးယားအတွက်ဒေသခံရေချိုးခန်း Store ကို Be မှ
ပိုမိုလေ့လာရန်> Buenos Aires, အာဂျင်တီးနား
တူနီးရှားမှာရှိတဲ့မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက် franchise စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကို
တူနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ (Arabic အဘိဓါန်: الجمهوريةالتونسية), မြေထဲပင်လယ်နှင့်အရှေ့အနောက်ရေကြောင်း slamming, တူနီးရှားရေလက်ကြားကိုဖြတ်ပြီးအီတလီအတွက်စစ္စလီကျွန်း facing, မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင်မြေထဲပင်လယ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်အာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏မြောက်ဖက်အစွန်အဖျားမှာတည်ရှိပါတယ် ဒါအတွက်လစ်ဗျားနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် ...
ဘင်္ဂလားအတွင်းဒေသခံဗာ Store ကို Be မှ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ငါ့ကိုအနီးရှိဒေသခံမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ကားအရောင်း Be မှ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးအရင်းရှင်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ခုကမ္ဘာကြီးစစ်ပွဲများစဉ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားမဟာမိတ်စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏အောင်ပွဲနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆယ်စုနှစ်အောင်မြင်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက်ကြောင့်ကိုယ့်တစ်ခုတည်းသောစီးပွားရေးအတွက်စူပါပါဝါ, ယဉ်ကျေးမှု, စက်မှုလုပ်ငန်း, etc အဆိုပါလယ်ပြင်ဖြစ်လာသည် ...
တူရကီအတွက်မီးဖိုချောင် franchise အခွင့်အလမ်းများ
1980 ပြင်ပကမ္ဘာမှဖွင့်လှစ်များ၏မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်မှုကတည်းကတူရကီစီးပွားရေးကိုခေတ်မီစက်မှုနိုင်ငံကမှတစ်ဦးအတော်လေးနောက်ပြန်စီးပွားရေးအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူတစ်ဦးရိုးရာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံကနေတစ်ဦးလျင်မြန်စွာအသွင်ကူးပြောင်းအတူခုန်-ရှေ့ဆက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ပါတီကတည်းက ...
ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ရောင်းဝယ်ရေး Be မှ franchise
ဇမ်ဘီယာအတွက်ဒေသခံမီးဖိုချောင်ရောင်းဝယ်ရေး Be မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
အာဂျင်တီးနားထဲမှာရေချိုးခန်း franchise အခွင့်အလမ်းများ
ဗီယက်နမ်၌ငါ့ကိုအနီးရှိဒေသခံမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ကားအရောင်း Be မှ
ဗီယက်နမ်ဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ 1986 ခုနှစ်တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပွင့်လင်းစတင်ခဲ့သည်။ 2001 ခုနှစ်တွင်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏9ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ဆိုရှယ်လစ်-oriented ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်၏တည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သုံးယောက်အဓိကစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကျဦးစားပေးဖော်ထုတ်ခွငျးတညျးဟူသော, industrializatio အာရုံစိုက် ...
သြစတြေးလျအတွက်ဒေသခံရေချိုးခန်းရောင်းဝယ်ရေး Be မှ
ရေသယံဇာတအလွန်သြစတြေးလျအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်, ရေချွေတာဘုံဘိုင်နှင့်အိမ်သာသြစတြေးလျ၏ဈေးကွက်ထဲမှာရေမှတ်များ၏စံနှုန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သြစတြေးလျသကျရှငျနအိမ်, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်။ ထိုအခါအိမ်ခြံမြေ devel တွင်ရှိပါတယ် ...
အင်ဂိုလာအတွက်ရေချိုးခန်းအမှတ်တံဆိပ်၏ဒေသခံအိမ်သာကားအရောင်း Be မှ
အင်ဂိုလာအတွက်အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နှင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်း၏စျေးကွက်ဝယ်လိုအားလည်းထိုကဲ့သို့သောရေချိုးခန်းအိမ်သာ, ရေချိုးခန်း, နစ်မြုပ်နှင့်ဘုံဘိုင်စသည်တို့ကိုအဖြစ်နှစ်စဉ်တိုးပွားလာခဲ့ပြီးလွမ်ဒါ, တစ်ဦးအတွက်ရေချိုးခန်းအမှတ်တံဆိပ် HOMURG ၏ဒေသခံအိမ်သာကုန်သည်ဖြစ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ...
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ဒေသခံမီးဖိုချောင် Store ကို Be မှ franchise
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအလွန်ဖွံ့ဖြိုးအရင်းရှင်တိုင်းပြည်, ဥရောပမှာရှိတဲ့လေးခုအကြီးဆုံးစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံသားများလူနေမှုအလွန်မြင့်စံများနှင့်အကောင်းတစ်လူမှုလုံခြုံရေးစနစ်ကရှိသည်။ HOMURG ကို Global ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးအပေါ်စျေးကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်ဒေသခံမီးဖိုချောင်စတိုးဆိုင် ...
USA တွင်ဒေသခံမီးဖိုချောင်ရောင်းဝယ်ရေး Be မှ franchise
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးခေတ်မီစျေးကွက်စီးပွားရေးရှိပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဂျီဒီပီကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအဆင့်။ 2017 ခုနှစ်တွင်အဓိကစီးပွားရေးဒေတာ: စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ): (လက်ရှိစျေးနှုန်းများမှာ) $ 194.854 ဘီလီယံအထိ။ လူတစ်ဦးချင်းစီစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်: (လက်ရှိစျေးနှုန်းများမှာတွက်ချက်) အမေရိကန် $ 59.407 ။ HOMURG ကို Global ခရှိပါတယ် ...
ဘရူနိုင်းအတွက်အပြင်အဆင် Stores ဒေသခံရေချိုးခန်း Be မှ franchise
ဘရာဇီးအတွက်ဒေသခံရေချိုးခန်းဒီဇိုင်း Stores Be မှ
ဘရာဇီးသဘာဝသယံဇာတများပေါကြွယ်ဝသည်နှင့်ဂျီဒီပီကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတောင်အမေရိကအတွက်ပထမနှင့်သတ္တမစီးပွားရေးကိုအဆင့်နဲ့ပြည့်စုံစက်မှုဇုန်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ BRICS နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုနှင့်တောင်အမေရိကနိုင်ငံများပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရီးရဲလ်ပြည်နယ်နှင့်အိုးအိမ်စက်မှုလုပ်ငန်း dev ခဲ့ ...
ဘိုလီးဗီးယားအတွက်ဒေသခံရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ Be မှ
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဒေသခံမီးဖိုချောင်နှင့်ဗာ Stores Be မှ
ဗီလာရေချိုးခန်းဒီဇိုင်း | ရေချိုးခန်း Decoration သလားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရေချိုးခန်းအပြင်အဆင် | ဗီလာအတွက်ရေချိုးခန်းကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
WC ရေအိမ်ဒီဇိုင်း | Spacing Size ကိုတစ်ဦးရေအိမ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
WC ရေအိမ် Decoration | အတားအဆီး-အခမဲ့်ဆောင်မှုများများအတွက်ရေအိမ်အလှဆင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Angkor Wat, ကမ္ဘောဒီးယား
စားသောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်း | တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ကဘယ်လိုပေါ် 8 Key ကိုအမှတ်?
Rio de Janeiro မြို့, ဘရာဇီး
စားသောက်ဆိုင် Decoration | ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအဘို့အလှဆင်စားသောက်ဆိုင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရေချိုးခန်းပန်းရေချိုးခန်းအကြံပြုချက်များ | အသေးစိတ်အတွက်တျသှငျးခံဒီဇိုင်း
ပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေးအကြံပြုချက်များရေချိုးခန်း | ရေချိုးခန်းပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေးလုပ်နည်းအပေါ်တချို့ကကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
Philadelphia တွင်, အမေရိကန်နိုင်ငံ
ရေချိုးကန်, နစ်မြုပ်နှင့် faucet နှင့်အတူရေချိုးခန်းစီမံကိန်းများ
Los Angeles မြို့, အမေရိကန်နိုင်ငံ
မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်, HOMORG သင်တို့အဘို့တန်ဖိုးကုန်ပစ္စည်းများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရွေးချယ်ရေးဖြန့်ဖြူး, ဒါပေမယ့်လည်းလူနေအိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ် application များအတွက်တျသှငျးခံဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုမပူဇော်သာ ... >
HOMURG သည့် 2020 မော်စကို HVAC များတွင်ပါလိမ့်မည် ...
ဗီဒို & အနတ္တ
ပုံစံများနှင့်အတူ Cream အတွက်စကျင်ကျောက်ကဲ့သို့သောစကျင်ကျောက်
အသေးစားမီးဖိုချောင်အကြံပြုချက်များ , မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းအကြံပြုချက်များ , မီးဖိုချောင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ, မီးဖိုချောင် Layout များ ,
မူပိုင်ခွင့်© 2009-2021 Guangdong HOMURG ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ All Rights Reserved